Salady sy legioma - Bezzia | Bezzia
ny salady sy legioma Tena ilaina voalohany izy ireo amin'ny sakafo Espaniola. Ankoatr'izay, amin'ny fananana karazana maro dia afaka manavao sy mamorona lovia samihafa sy tsy manam-paharoa ho an'ny latabatra isika. Noho io antony io, ao Bezzia dia te hanome toerana ireo sakafo ireo izahay, izay mahasalama ihany koa ary manana kalitaon'ny sakafo matanjaka.
Ny salady sy ny legioma dia loharano iray lehibe amin'ny rano, mineraly, vitamina, fibre ary singa. Ho fanampin'izany, ny firafiny sy ny fandraisany anjara dia tsy miova fanovana noho ny fiasan'ny hafanan'ny fandrahoana sakafo ary izany dia manome tombony lehibe kokoa.
Ao amin'ny faritra natokana ho an'ny fomba fahandro salady sy legioma Hahita fomba maro isan-karazany amin'ny fanomanana ianao, na dia ny zavatra tsara azon'ireto safidy voalohany ireto dia tsotra sy mora raisina.
Zucchini sy mozzarella gratin
ny Maria vazquez hace Andro 4 .
Androany ao amin'ny Bezzia dia manomana fomba fahandro tena tsotra izay heverinay fa mety ho an'ny sakafo hariva, courgette ary mozzarella gratin….
Zucchini natono sy salady fromazy osy
ny Maria vazquez hace Herinandro 4 .
Niditra tamin'ny vanim-potoanan'ny taona izay tena mankafy salady izahay, fahavaratra. Misy fomba maro ahafahana…
Murcian mojete miaraka amin'ny sardines amin'ny menaka
ny Maria vazquez hace 1 volana .
Murcian mojete dia salady voatabia Murcian mahazatra. Ny voatabia, amin'ny maha-protagonista azy, dia azo ampidirina amin'ny fomba roa...
Zucchini mofomamy miaraka amin'ny saosy yaourt
ny Maria vazquez hace 2 volana .
Mitady tolo-kevitra manankarena, maivana ary mahasalama entina eo amin'ny latabatrao ve ianao? Ireo zucchini nendasina miaraka amin'ny saosy…
Mofo fisaka voatabia cherry
Mbola tsy nanomana sira coca izahay hatreto tany Bezzia ary te hanao izany izahay. Nisafidy ny…
Ny tongolo gasy sy karaoty miaraka amin'ny atody nopotehina
Maivana sy mampionona, toy izao ny ron-kena misy poireaux sy karaoty, izay nampiarahanay atody nopotehina. Mety ho an'ny…
Sakafo nendasina miaraka amin'ny saosy chimichurri
Tsy misy fomba fanamboarana tsotra kokoa noho ity. Ny laisoa nendasina miaraka amin'ny saosy chimichurri izay karakaraintsika anio dia lasa…
Salady tsaramaso maitso miaraka amin'ny tonelina, voatabia ary atody nandrahoina
ny Maria vazquez hace 3 volana .
Mamarana ny herinandro ao Bezzia izahay amin'ny soso-kevitra mety indrindra amin'ity vanim-potoanan'ny taona ity izay azonao aroso mafana na mangatsiaka….
Salady ovy sy voasary
Mila akora vitsivitsy sy mora hanomanana ny salady atolotray anio. Salady ovy sy voasary izay…
Ovy sy tsaramaso maitso miaraka amin'ny chickpeas
ny Maria vazquez hace 4 volana .
Androany ao amin'ny Bezzia dia manomana sakafo feno izahay: ovy sy tsaramaso maitso miaraka amin'ny chickpeas. Miaraka amin'ity sakafo ity ihany...
Salady ovy misy anchovies sy menaka voantsinapy
ny Maria vazquez hace 5 volana .
Ny fomba fahandro atolotray anio dia angamba ny tsotra indrindra amin'ny isan'ny nomaninay. Ary mbola mety ho lasa...